I-Reactor yeNtlalontle: Ama-7,000 aBaphembeleli boLuntu kuLungele | | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 27, 2013 NgoLwesine, Septemba 26, 2013 Douglas Karr
ChaCha yinkampani enkulu endikhe ndasebenza nayo ixesha elide xa ndiqala ngokusungula iarhente yam. Kunzima ukukholelwa ukuba uChaCha uneminyaka esi-8 ubudala… inkampani i-agile kwaye ihlala ihamba kwaye iphucula. Abayiyo inkampani ye-Valley, ke abahlali kwindawo ebonakalayo-kodwa bahlala bethe tye kwiiwebhusayithi eziphambili kwihlabathi ukugcwala kwabantu. Kwaye ekuhambeni kwexesha, ndibabone beqokelela oku kulandelayo. Oku kulandelayo kukhutshiwe ithuba elitsha kwishishini.
Ngelixa uChaCha ecofe kuluntu lwabo ukuze babelane ngolwazi, akukho namnye ngaphandle kwenethiwekhi owayenofikelelo ngqo-kude kube I-Reactor yoLuntu. I-Reactor yeNtlalontle liqonga lentengiso elinceda iimveliso ukunxibelelana nabaphulaphuli abafanelekileyo ngokunxibelelana nabashukumisi abaphambili kwezentlalo. Inethiwekhi yeprimiyamu, ekhethwe ngononophelo ukukhulisa umyalezo wakho kunye nokwenza ukubandakanyeka kwabathengi kuhlobo lwakho.
Ngaphezulu kwe-7,000 yempembelelo, ukufikelela kwenethiwekhi yabo kuyothusa-kufikelela kumakhulu ezigidi zabantu. Abaphembeleli bayavavanywa ukuqinisekisa ukuba intetho engamanyala ayisetyenziswanga, imiyalezo ayinakuze ilahlekise, kwaye intengiso ibonakaliswe ngokucacileyo.
Xa impembelelo ingena kwiReactor yeNtlalontle, banikwa uluhlu olwahluliweyo lwemikhankaso yangoku. Ayisiyo inkqubo ezenzekelayo apho iReactor yoLuntu inokuthi ithathe isigqibo malunga nokuba ityhale ntoni kwaye yenze egameni lakho. Abaphembeleli banokufunda, baphonononge kwaye bathathe inxaxheba kwimikhankaso yokukhetha kwabo. Banokubeka iliso kwii-commissions zabo-bayityeshele eyam kuba ndisaqala;).
Ukuba uyimpembelelo, iReactor yeNtlalontle ifuna ukuba ukhwele, nayo! Bajonge abachaphazeli eluntwini abanonxibelelwano lokwenyani nabalandeli babo. Bakhangela iinkokeli kumajelo asekuhlaleni abaqondayo abaphulaphuli babo. Bafuna abantu abakrelekrele abayaziyo indlela yokuyila imiyalezo eyomeleleyo ekhuthaza abaphulaphuli babo ukuba benze. Joyina Iimpembelelo zeReactor yeNtlalontle Ngoku.
tags: chachafumana abachaphazelimpe mbeleloimpembelelo kwintengisoyentengiso yeendabaisiguquli sentlalo
Bangaphi abalandeli ekufuneka ujoyine
Molo Alison-andiqinisekanga kwaye unxibelelwano lwam alusekho! Unokufuna ukunxibelelana nabo ngqo.